Tratry ny Andro Veterans | Martech Zone
Tratry ny Andro Veterans
Alahady, Novambra 11, 2007 Alahady, Martsa 24, 2013 Douglas Karr
Tamin'ny 1954, ny filoha Eisenhower dia nanao sonia ny fanambarana hanovana ny anarana hoe Armistice Day ho Fetin'ny Veterans. Andro fankalazana ny Andro Armistice no nankalazana ny andro nifaranan'ny Ady Lehibe Faharoa. Ny filoha Ford dia nanasonia ny andro ho fialantsasatra federaly tamin'ny taona 1 ary ny andro fankalazana veterans voalohany dia ny 1975. Tamin'ny 1978, ny herinandron'ny Andro Veterans dia fantatra ankehitriny ho Herinandron'ny fahatsiarovan-tena ho an'ny veterana ho an'ny sekoly mba hampahafantarana ireo anjara biriky sy sorona nataon'ny Veterans.
Ny Andro Veterans dia tsy mitovy amin'ny Andro Fahatsiarovana ary matetika dia afangaro amin'izany. Ny Andro fahatsiarovana dia fanomezam-boninahitra ireo lehilahy sy vehivavy nanolotra ny ainy ho an'ny firenena. Andro fankalazana ny asa fanompoana ny Andro Veterans.
Nahazo voninahitra aho nipetraka teo amin'ny latabatra iray tao Techpoint miaraka amin'ny ben'ny tanàna vaovao any Indianapolis, Greg Ballard, amin'ny zoma. Izaho sy ny ben'ny tanàna Ballard dia nifanakalo hevitra momba ny serivisinay any amin'ny Golfa Persia any Desert Shield sy Desert Storm. Ben'ny tanàna Ballard dia Major tao amin'ny Corps Marin. Izaho dia Mate elektrisianina tamin'ny sambo fitaterana tanky, ny Spartanburg County (LST-1192) izay nitatitra ireo miaramila an-dranomasina. Nanjary mpinamana be tamin'ny Corps vitsivitsy aho, indrindra fa ny roa EOD ry zalahy niara-niasa nandritra ny volana maro.
Ny fanajana ny veterana dia tsy fanajana ady
Ny fanajana ny veterana dia tsy mitovy amin'ny fanajana ady. Tsy misy maniry ny hisian'ny fandriam-pahalemana mihoatra ny Veteranina. Azafady, aza manala baraka ny tafikay amin'ny tsy fanekena ny sorona ataon'izy ireo ho an'ny fianakaviany sy ny fireneny. Mampijaly azy ireo ny governemantany ihany - tsy mila henon'izy ireo amin'ireo olona nanolotena azy ireo hiaro - ianao sy ianao.
Tags: ela nihetezanaveterans day
PHP: Boky mahafinaritra sy drafitra MVC ho an'ny PHP
Lahatsary: ​​Colts.com manao dokambarotra horonantsary ho an'ireo mpanohana amin'ny fomba mety!
11 Novambra 2007 à 10:48
11 Novambra 2007 à 4:52
11 Novambra 2007 à 6:13
Tetikasa mpiady maratra
11 Novambra 2007 à 7:31